Ihe a na - eme n’ebe a na - akpọsa n’ebe a na - akụkụ ahịhịa n’ebe a na - akụkụ ahịhịa - China Boegger - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ebe ebe usoroiheomume>Ụzọ a na - achọ n’azụ
A pụrụ ịkpọcha wire n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ dị iche iche n'ahụ́ a na-agbụ, aluminium alloy, brass, Ọma ma ọ bụ ihe ndị ọzọ a na - eme. Ndị na - ede ihe n’oge a na - enwe ugbu a n’ahụ́ ndị a na - achọ n’ahụ́. A na - eji ya eme ihe nile dị ka ákwà, skrips maka ụlọ nzukọ iri nri, iche n’ebe a na - elekọta n’ụlọ nri, n’ebe a na - emecha mma, Ụfọdụ n’ime anụmanụ na oyi nchebe, n’akwụkwọ.
Ụlọ a na - achọ a na - achọ n’aha
Akụkụ ụgbọ mmiri a na - achọ n’elu ụkwụ
Ihe ndị a na - akpọsa n’ahụ́ n’ụlọ a na - akpọ: ígwè, aluminium, kopa, phosphor bronz, n’akwụkwọ. Site n'ime ya dị iche iche, ụdị ụcha dị iche iche, ike na mgbanwe, Ụdị ákwà e ji ígwè na - enye ụzọ a na - achọ mma n’oge a maka owuwu ụlọ. Mgbe a na - eji ya eme ihe dị ka ákwà, ọ na - enye ìhè mgbanwe dịgasị iche iche n’ụzọ dịgasị iche iche, ọ na - emekwa ka e nwee echiche na - enweghị ókè.
Ihe a na - eme ka a na - achọ n’ala ọlaọcha.
Ụbọcha a na - achọ ígwè a na - achọ n’ala ọlaọcha.
Mmadụ a na - achọ n’ahụ́.
2. A na - eji eme ihe n’ime mmiri, mmanụla, mmiri ọgwụ, nri, ọgwụ, ịrụpụta ígwè na ọrụ ndị ọzọ.
3. A na - eji ya eme ihe maka nchịkọta ụgbọelu, ọchịchị, ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ ikuku, a na - eji ya eme ihe n’ahụ́, a na - akpọ n’ahụ́, a na - akpọ ya. a kwesịrị ekwesị maka nchepụ dị iche iche, iwepụ ájá na a chọrọ nkewa.
Akwụkwọ: a na - eji ya eme ihe n’ụzọ nile n’ịbụ n’ime mmiri ọgwụ fiber, fiber bụ́ isi, fiber, akpụkpọ, ákwà na - akwụsị na ihe ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ a na-adị irè: spinneret na ihe ndị dị iche iche ndị a na - ebubata na ígwè a na - ebubata, ngwá akpụkpọ na a na - adịghị a na - akwụsị, extruder nke abụọ ...
Ọ dabara adaba iji kọtị bater na ụgbụ. Ịnọ nri, mmanụla, ụlọ ọrụ mmiri ọgwụ, nri, ọgwụ, mmịpụta ígwè, n’agha.
Ochie:Ahụ ígwè a gbawụsa
Mwagụ̀ decorative metal panels, decorative wire mesh, building cladding, external decoration,
A na - eji uwe a na - achọ mma iji mee n’ụlọ ụlọ nzukọ e ji eme ihe ngosipụta na ụlọ a na - eme ihe ndị dị iche iche na a na - eme ka a na - achọ mma n’ahụ́
Ụzọ a na - achọ n’azụE nwetara karịsịa site n’ubi owuwu na owuwu ihe ọ bụla n’ihe ndị ahụ, n’ọrụ ma ọ bụ ụdị ọdịdị ya mara mma n’ihi na ụcha ya, ụdị ọkụ nke oge, ezigbo ọrụ, eiji na ihe ndị ọzọ ka a n...
Gịnị Bụ Ịgba Ụlọ Akwụkwọ?
ỤzọỤzọỌ bụ akpụkpọ ahụ́ dị n’èzí, ma ọ bụ ámá nke ụlọ, na - agụnyekwa ihe nile a na - eme n’akụkụ ahụ́ na ihe ndị a na - eme iji kpuchie n’èzí ahụ. Ịgba mkpụrụ pụrụ ịrụ ma ịchọ mma ma nzube a na - arụ...
Olee otú ụgbọala dị iche iche ịchọ mma?
Olee otú ụgbọala dị iche iche ịchọ mma?AhụỤzọNke ụgbọala na - ekpuchichi n'elu, windo, ụgbọ mmiri nke ahụ́ ụgbọala na ígwè. Ihe ndị bụ́ isi ya:(1):Ụzọ a na - achọ ụgbọala a na - achọ n’ahụ́.(2) Akwụkw...
Ụfọdụ wiire na - achọ aṅụ
Ihe ndị a na - eme n’ebe a na - arụpụta n’ihe ndị a na - achọpụta n’ebe a na - achọ n’ime ha bụ ihe ndị a na - eme n’ihe e ji eme ihe n’ime. A pụrụ iji ígwè dịgasị iche iche mee ya, ọ bụkwa ụdị ihe ọh...
Mmetụta nke a na - achọ mma n’èfụ
Ịchọpụta n’èzụAkụkụ ndị gụnyere mgbidi n’èzí, ụzọ n’èzí na windo, balcony, plinth, waịa isi, awning na mgba apron, nd.Mmetụta nke a na - achọ n’èzí bụ ịnọgide na - eme ihe bụ́ isi nke ụlọ ahụ na ịtụwa...
Ọrụ a na - arụ n’ahụ́ a na - achọ n’ahụ́ dị ka a na - esonụ
Ụdị nrụ ahụỤfọdụ wiire na - achọ aṅụDị ka a na - esonụ:Ọrụ nke 1: a na - emegide ihe. Ihe a kpọrọ a na - eme ka a ghara ịna - eme ihe n’ahụ́ iji mee ihe iji guzogide nchegbu nke a na - akpọ mgbidi kpụ...
Ụkpụrụ a na - eme ka e wuo ụlọ dị ka a na - esonụ
Ụkpụrụ a na - eme ka e meeỤzọ ụlọ aDị ka a na - esonụ:N’ihe dị ka afọ 200 gara aga, ndị mmadụ pụrụ iche na ugwu, ọdọ mmiri na ọzara bụ akụkụ ebighị ebi nke ụwa. Ma ugbu a anyị maara na a ga - eme ka u...
Ihe Ndị Na - akpọsa Ụlọ Mmadụ n’Ebe Ndị Mmadụ n’Ụlọ Mmadụ
Ihe Ndị Na - akpọsa Ụlọ Mmadụ n’Ebe Ndị Mmadụ n’Ụlọ MmadụNdesịta ozi ndị ahụ ndị ahụMa ọ̀ bụ na ị na - emepụta ma na - ewupụta ebe obibi gị ma ọ bụ n'ebe azụmahịa ma ọ bụ na ị na - eme ka ya, Anyị na ...